ခရစ်တော်၏ ပုံစံကို ရဲရင့်စွာပြသခြင်း | Shwe Canaan TV
ခရစ်တော်၏ ပုံစံကို ရဲရင့်စွာပြသခြင်း
00Unknown Monday,4January 2016
တစ် သခင်ယေရှုဘာလုပ်မည်နည်း What Would Jesus Do? တောင်ပေါ်၌ တစ်ညလုံးဆုတောင်းပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကို ရွေးကောက်ခ...
သခင်ယေရှုဘာလုပ်မည်နည်း What Would Jesus Do?
တောင်ပေါ်၌ တစ်ညလုံးဆုတောင်းပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကို ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားရန် စေလွှတ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ကို တမန်တော်များ (apostles) ဟုခေါ်သည်။ တမန်တော် (apostles) စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စေလွတ်ခြင်းခံသူ(one who is sent) ဖြစ်သည်။
တောင်ပေါ်မှ ဆင်းပြီးသော အခါ သခင်ယေရှုက သာသနာလုပ်ငန်း အတွက် သူတို့အား စတင်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ပထမဦးစြာ သူတို့၏ အသက္တာ လမ်းညွှန်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။
သူတို့သည် အနစ်နာခံခြင်း၊ ခရစ်တော်ကသူတို့၏ ရွေးကောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ လူကြိုက်မများသော ဘ၀နှင့် ခရစ်တော် အတွက် ညှင်းဆဲခြင်းစသည်ဖြင့် အသက်ရှင်တွေ့ကြုံခံစား ကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သူတို့အား အဘယ်သို့ ကျင့်ကြံပြုမူသင့်သည်ကို သွန်သင်သည်။ ငါဆိုသည်ကား၊ သင် ၏ ရန္သူကို ချစ်ကြလော့။ သင်တို့ကို မုန်းသောသူတို့အား၊ ကျေးဇူးပြုကြလော့။ သင်တို့ကို ကျိန်ဆဲသော သူတို့ အားမေတ္တာပို့ကြလော့။ သင်တို့ကို နောက်ယှက်သော သူတို့အဘို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြလော့၊ သင်၏ပါးတစ်ဖက်ကို ပုတ်သောသူအား ပါးတစ္ဖက္ကို ပေးဦးလော့၊ သင့်၀တ်လုံကို ယူလို၍ တရားတွေ့သောလူအား သင့်၀တ်လုံကိုလည်း ယူစေခြင်းငှာ ခွင့်ပေးဦးလော့၊ တောင်းသော သူအား ပေးလော့၊ သင့်ဥစ္စာကို သိမ်းယူသောအား ပြန်၍မတောင်းနှင့်၊သူတို့သည် ကိုယ်၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသည့်အတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့။
သင်တို့ကို ချစ်သောသူတို့အားသာ ချစ်တုံပြန်လျှင် အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်း။ ဆိုးသောသူတို့သည် ကိုယ်ကိုချစ်သောသူတို့အား ချစ် တုံ့ပြန်ကြသည် မဟုတ်လော။ သင်တို့ကို ကျေးဇူးပြုသော သူတို့အားသာ ကျေးဇူးပြုလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်း၊ ဆိုးသောသူတို့သည် ဤမျှလောက် ပြုကြသည်မဟုတ်လော။ သူတစ်ပါးအား ဥစ္စာချေးငှားသောအခါ ဆပ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျှက်ချေးငှားလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်း၊ ဆိုးသောသူတို့သည် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းကို ခံလို၍ ဆိုးသောသူချင်းတို့အား ချေးငှားတတ်သည်မဟုတ်လော၊ သင်တို့မူကား ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့။
ကျေးဇူးပြုကြလော့၊ တစ်စုံတစ်ခုကိုရမည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ ချေးငှားကြလော့ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသည် ကျေးဇူးမသိသောသူ ဆိုးညစ်သော သဘောရှိသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏၊ ထို့ကြောင့်သင်တို့အဖသည် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း သနားခြင်းစိတ်ရှိကြလော့(လုကာ ၆း၂၇-၃၆)။ အထက်ပါ သခင်ဘုရား မိန့်မှာချက်များအပေါ် သင်သည် အဘယ်သို့တုန့်ပြန်သနည်း။ ဟုတ်တယ်။ ဒီမိန့်မှာ ချက်တွေဟာ ကျွှန်တော့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဘဲလေ။
ကျွှန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်တွေ ဒီလိုလုပ်တာဘဲလေ၊ ဟုပြောနိုင်ပါသလား၊ ကျွှန်တော်တို့အားလုံး ဒီလိုအသက်ရှင်တာဘဲဟု သင်သည် သက်တောင့်သက်သာ ခံစားပါက၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ဖတ်ရှုပြီး မိမိအသက်တာစစ်ဆေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ဤေနရာ၌ ခရး်တော်ဘု၇ားသွန်သင်သောအရာသည် အခြားကမ္ဘာတခု၏ ကျင့်၀တ်ဖြစ်သည်။ ဤကျင့်၀တ်သည် သာမန်ထထက်မြင့်မြတ်ပြီး၊ အေသြးအသားဇာတိ၏ အထက် သာ၍မြင့်ရာကုန်းပေါ်၌ရှိသောအသက်တာမျိုးဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်၏ အသက်တာသည် အိမ်နီးချင်းများ၏ အသက်တာနှင့်ကွာခြားရမည်ဟု သခင်ယေရှုက အလေးအနက်တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ထိုသို့ကွာခြားမှုမရှိပါက မစိုးရိမ်ကြပါနှင့်၊ ကျွန်တော်လည်း သင်တို့နှင့် အတူတူပါပဲ ဟု သူတို့အားပြောပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၌ အသက္တာ ထူးခြားမှုမရှိပါက၊ သင်သည်ခရစ်တော် ကြောင်းကို သူတို့အား ဟောပြောသောအခါ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် နားထောင်ကြမည်နည်း။ ထိုကွာခြားမှုသည် အသက္တာ၌ ပဓါနက်ကာ၊ အသက္တာ၏ အထက်၌ ရှိပါသည်။ တဖက်တွင် ထိုသူတို့သည် သူတို့နှင့် ကျွနု်ပ်၏ အသက်တာအကြား၌ကြီးမားသောကွာခြားမှုကို တွေ့မြင်ကြပါက၊ ကွာခြားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို သိချင်လာကာ၊ ကျွနု်ပ်အတွက်သူတို့အား ဧဝံဂေလိတရားေ၀ငှရန် အခွင့်အလမ်းပွင့်သွားပေလိမ့်မည်။ The torchbearers တည်ထောင်သူ Major Ian Thomas ကဤသို့ပြောခဲ့သည်။ သင်သည်အရည်အသွေးရှိသောအသက်တာသာလျှင် သင်၏အိမ်နီးချင်းတို့အား ဆွဲဆောင်နိုင်မည်။
သင်၏အသက်တာသည် သူတပါး ထံသို့ပွင့်လင်းထထင်ရှားကာ ချီးမွမ်းစရာဖြစ်လာမည်။ ၎င်းသည် လူသားမ်ား ရှင်းပြ၍မရလောက်အောင်ထူးခြားပါသည်။ လူ့အစွမ်းသတိ္တနှင့် အတုယူရန် မဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်သော်လည်း၊ သင်၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင်က သူ၏ သဏ္႑ာန်တော် ပေါ်အောင်လုပ် ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ပြောလျှင်၊ သင်၏အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေများက သင်ပြောသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သင်၏အသက်တာ၌ ပါရှိကြောင်းသိမြင်သဘောပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မယုံကြည်သူတို့သည် ကြီးမားသောသူရဲကောင်းလုပ်ဆောင်မှုမျိုးမကြာခဏလုပ်တတ် ကြသည်။ သူတို့သည် ကျောက်ကပ်ယောင် ရောဂါသည်များအတွက် ကျောက်ကပ်များကိုပေးလှူကြသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော မိဘမ်ားကို သာမန်ထထက်ကျော်လွန်ကာပြုစုတတ်ကြသည်။ မေတ္တာဂရုဏာလုပ်ငန်းများအတွက် ရက်ရောစွာပေးလှူကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော မယုံကြည်သူတို့၏သာမန်ပြုမူလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကျော်လွန်အောင် သခင်ဘုရားက ကျွနု်ပ်တို့အားခေါ်ပါသည်။ အထက်ပါအတိုင်း ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့် မယုံကြည်သူများက ခရစ်တော်ကို မုချယုံကြည်လက်ခံကြမည်ဟု အာမခံချက်မရှိကြောင်း သိဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်ပြုမူကျင့်ကြံသကဲ့သို့ပြုရန် တာ၀န်ရှိသကဲ့သို့ မယုံကြည်သူဖက်ကလည်း ခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံရန် တာ၀န်ရှိကြပါသည်။ ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကိုကြားသော်လည်း ငြင်းပယ်သောသူများ ရှိတတ်စမြဲဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်သည်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ပါက၊ စိတ်ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းသောသူဟု ထင်မှတ်သောသူများ လည်းရှိမည်။
ထိုအချိန်တွင်သင်ခံရသော ဒုက္ခနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းများသည် ခရစ်တော်ခံခဲ့သောဒုက္ခနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းများထက် ပို၍သက်သာပါသေး ကြောင်းသတိရပါ။ တပည့်သည် ဆရာထက်မသာပါ။ တခါက ရုရှားလူမျိုးစာရေးဆရာ Fyodor Dostoevsky က၀တ္တုတစ်အုပ်ရေးခဲ့ပါသည်။ ထို၀တ္တုထဲတွင်သူသည် မင်းသား Myshkin (မီစ်ကင်း)ကို ပြည့်စုံသောစံပြလူသားအဖြစ် ကြိုးစား၍ဖေါ်ထုတ်ရေးသားသည်။ သို့ရာတွင်၊ သူ၏စာဖတ္ပရိတ္သတ္က ထိုမင်းသားကိုနားမ လည်နိုင်ကြချေ။ သူတို့သည် ထထိုစာရေးဆရာကို စိတ်မနှံ့သူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။ ထိုစာအုပ်အမည်မှာ လူထုံ(The Idiot) ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ သဏ္႑ာန်ကို ပို၍ဆောင်လေလေ၊ လူအမ်ားက ကျွနု်ပ်တို့ကိုလူထုံဟုထင်မှတ်လေလေဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရှင်ပေါလုက ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌ကား၊ သေခြင်းတိုင်အောင်သေခြင်း၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ ကယ်တင်သောသူတို့၌ ကားအသက်ရှင်ခြင်းတိုင်အောင် အသက်ရှင်ခြင်း၏ အမွေးအကြိုင်ဖြစ်ကြ၏ ဟုပြောဆိုသောစကားသည် မှန်ပေသည်။ ဘုရားအလိုတော်နှင့်ညီသောကျွနု်ပ်တို့၏ ပြုမူကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့် မယုံကြည်သူတို့အားဆွဲဆောင်၍ ခရစ်တော်ထံသို့ရောက်သူများရှိသည့် နည်းတူ၊ တချို့သည် စိတ်ရှုပ်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့အား လူထုံ ဟုမှတ်ယူကြပါသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ် ကြောင်းကို ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့် ဖေါ်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်သင်ခန်းစာများတွင် ခရစ်တော်၏ မိန့်မှာချက်များဖြစ်သော ရန်သူကိုချစ်ခြင်း၊ ခွင့်လွတ်ခြင်း၊ အဆိုးကိုအကောင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်း၊ ကလဲ့စားမချေဘဲသည်ခံ၍နေခြင်း၊ ပြန်ရရန်မျှော်လင့်ပဲပေးခြင်း . . . စသည်တို့ကို အတိအကျခံယူကျင့်သုံးကာ၊ တခုခုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံသောအခါ၊ သခင်ယေရှုဖြစ်ခဲ့လျှင် သူသည် အဘယ်သို့တုန့်ပြန်ကိုင်တွယ်မည်နည်း၊ သခင်ယေရှုဘာလုပ်မည်နည်း ဟု လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီး၊ ခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်သည့်အတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံကြသော ယုံကြည်သူတချို့၏ အတွေ့အကြုံများကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရန် ဖော်ပြပါမည်။
သာမန်အသက်တာကိုကျော်လွန် ၍ အသက်ရှင်ခြင်း
Shwe Canaan TV: ခရစ်တော်၏ ပုံစံကို ရဲရင့်စွာပြသခြင်း